4x4 rada biraha aan birta lahayn oo lagu rakibey mashiinada iibinta ee Uniqlo-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
4x4 kiibood biraha ahama ee lagu rakibey mashiinada iibinta ee Uniqlo
Waqtiga: 2020-05-26 Hits: 15
Qof kasta oo u yimid Japan si fiican ayuu u yaqaan sida Makiinada wax laga gatos ku nooshahay gees walba dariiq kasta, marka waa inaadan la yaabin inaad ogaatid in mid ka mid ah shirkadaha ugu waa weyn dalka ay go aansadeen inay bilaabaan xayeysiiyahooda gaarka ah ee Mareykanka.
Laakiin kani waa Uniqlo aan ka hadlayno, markaa mashiinkiisa wax iibintu wuxuu soo bandhigi doonaa waxyaabo ay xirtaan halkii ay ka cabi lahaayeen. Taasi waa sax, waxay dhistay mashiin iibiya dharka iibiya.
Sida ay noqon karto dunida koowaad, Uniqlo ayaa qorsheyneysa inay 10 ka mid ah mashiinnada iibinta lix-fooqa sare leh ku iibiso goobo ku yaal Mareykanka oo dhan, oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha iyo suuqyada dukaameysiga ah, Wall Street Journal ayaa Arbacadii weriyay.
Marooyinka dharka ka buuxaan waxay lahaan doonaan muuqaallo dijital ah una oggolaanaya dukaameeysatada inay xushaan cabbirka iyo midabka sheyga, oo la filayo inay ku koobnaadaan laba qaybood: jaakado hoosaad iyo shaati-kuleylka kuleylka haysa. Baadh xulashada, ku dhufo batoonka wax iibsiga, oo iibsashadaadu waxay ku dhex dhici doontaa saxanka sanduuqa dhexdiisa ama karo.
Bixiyeyaasha ayaa runti ku imaan kara gacan qabad haddii aad fasax ku jirto oo aad ilowdid jaakad diiran. Markaa, si dhaqso leh ayaad uga soo qaadan kartaa mid ka mid ah mashiinka Uniqlo marka aad ka dagayso garoonka diyaaradaha.
Warshadaha Isgaarsiinta Yuyao XiangLong wuxuu bixiyaa tayo balaaran oo kala duwan, biyo-xireenno, mashiinka iibinta vandal ee vandal. bir bir bir ahs. Dhamaan furayaasha waxaa laga sameeyay waara Bir daxal laheyn or zinc alloy. Badhanka dusha, qaabka iyo qaabka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Hore: Furaha birta dhagaxa ah ee lagu rakibay Kiosk iswiidhishka ah
Xiga: Furaha Birta Iftiinka leh ee lagu dhejiyay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Maska